Fanaanada caanka ah Nicki Minaj oo ka baaqatay bandhig ay ku qaban laheyd dalka Sacuudiga… – Hagaag.com
Fanaanada caanka ah Nicki Minaj oo ka baaqatay bandhig ay ku qaban laheyd dalka Sacuudiga…
Posted on 10 Luulyo 2019 by Admin in fanka // 0 Comments
Bandhig heesa ah oo lagu waday toddobaadka soo socdka inuu ka dhaco dalka Sacuudiga magaalada Jeddah ayaa la baajiyay, markii ay sidaa go’aansatay Nicki Minaj oo ka mid ah fannaaniinta caanka ah.
Go’aankii horey loogu shaaciyay dalka Sacuudiga inay gabadha bandhig ku qabanayso ayaa dad badan waxay ula muuqaatay arrin cajiib ah, waxaana dowladda Sacuudiga ay arrintaa kala kulantay dhaleeceyn badan.
Nicki Minaj , ayaa hadda si cad u sheegtay inaysan tagi doonin dalka Sacuudiga, waxaa ay go’aankeeda sabab uga dhigtay in marna aysan bandhig ku qaban doonin dalkaas oo ay ku tilmaamtay in lagu dhibaateeyo haweenka aanan laga rabina dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda.
“Inkastoo aan rabo inaan taageerayaasheyda Sacudiga aan u qabto bandhig fanneed, hadana waxaan ogaaday inay muhiim tahay inaan si dhab ah u muujiyo taageerada aan u hayo dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda, xuquuqda dumarka iyo xorriyatul qowlka” ayay tiri Nicki Minaj.
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee fadhigeedu yahay Maraykanka ayaa Jimcihii toddobaadkii hore warqad u dirtay Minaj, iyagoo ka codsaday in aysan ka qeyb galin bandhiga lagu casuumay ee dhacaya 18-ka July.